ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: တာရာမင်းဝေ၏ စာအုပ်များ
Unknown September 27, 2009 at 8:24 AM
ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ အရုပ်မြို့တော် စာအုပ်လေးလည်းရှာတင်ပေးပါအုံး
* ကောင်းကင်အကြွေကောက်တဲ့လက် (ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၆)
* ကျွန်တော်နှင့်ကြယ်မြင်လမြင် လောကဓံ
ကိုလူထွေး November 7, 2009 at 8:29 AM
မျှဝေပေးတဲ့ ဆရာချမ်း ကျေးဇူးပါ..
MANORHARY December 2, 2009 at 9:13 AM
နွေဆူးလင်္ကာ December 9, 2009 at 7:24 AM
ပြာကို ဖတ်ချင်ပါတယ်။ အလင်္ကာလူတစ်ယောက်အကြောင်းဆိုတာလဲ ထွက်ဖူးတယ် ထင်တယ်နော်။ ရှာကြည့်ပါဦးနော်။
Unknown December 25, 2009 at 1:41 PM
Unknown September 28, 2010 at 9:45 AM
ko chan lin nay!
sayar Taryarminwai yae "ကျွန်တော်နှင့်နွေယာဉ်စွန်းတန်း"စာအုပ်လေးလည်းရှာတင်ပေးပါဦးဗျာ"
မင်္ဂလာပါ ဒီblog ကို ခုမှတွေ့တာပါ..
ကိုရွှေဖုန်းစာအုပ်တွေကို ကျွန်တော်ကစုနေတာပါ..ခုလိုတွေ့တော့ အားကြီးဝမ်းသာသွားပါတယ်..ဒါပေမယ့် download မလုပ်တတ်တာတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်
Unknown March 24, 2011 at 6:49 AM
ကျွန်တော် ဒီblogလေးကို ခုမှသိတာပါ
ကိုရွှေဖုန်းစာအုပ်တွေ အကုန်တွေ့ရတော့ အရမ်းကြိုက်သွားတယ်
ဒါပေမယ့် တချို့download လုပ်မရဘူးခင်ဗျ
Number1Princess April 11, 2011 at 2:19 PM
အခုလို ဆရာ့စာအုပ်တွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ တွေ့ရတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပန်းလက်ဖ၀ါးမှာ ပါးအပ်ပုိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ကောင်လေး Link က အလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြန်ကြည့်ပေးလို့ရမလားမသိဘူး။
အရိပ်နွေ July 9, 2011 at 3:29 AM
အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေရှိရင်တင်ပေးပါလားအစ်ကိုချမ်းလင်းနေ...အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်မှာမှရှာမရလို့.. ကျေးဇူးတင်ပါတ်
naylinphyo October 5, 2011 at 12:18 PM
Admin November 11, 2011 at 1:08 AM
itkngal November 30, 2011 at 9:48 PM
ကျေးဇူးပါပဲ ၊ တာရာမင်းဝေစာအုပ်တွေကို ဖတ်ရလို့ပါ။
ဒါပေမယ့် ဇစ်ဖိုင်နဲ့ ဒေါင်းရရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်
ကျော်ဦး January 19, 2012 at 7:42 PM
ကျော်ဦး January 19, 2012 at 7:51 PM
ုကျော်ဦး January 19, 2012 at 8:07 PM
the story of poems April 21, 2012 at 1:34 PM
အကိုရေ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် “ ငါ့ရင်ခွင်ကြားက နှင်းဆီဓားသွားတစ်လက် ” စာအုပ်ကို တင်ပေးပါလား။
the story of poems April 21, 2012 at 1:35 PM
အကိုရေ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် “ ငါ့ရင်ခွင်ကြားက နှင်းဆီဓားသွားတစ်လက် ” စာအုပ်တင်ပေးပါလား။
thitpin May 10, 2012 at 9:42 PM
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို အသစ်လေးတွေလည်းထပ်မံ တင်ပေးပါဦးလို..။၊
thitpin May 10, 2012 at 9:43 PM
မနက်ဖြန်ခါမှာ ထားခဲ့တဲ့မျက်နှာ ကိုတင်ပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒေါင်းလုဒ် မရဘူးဖြစ်နေတယ် အကိုရေ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင်သတိုးတေဇ စာအုပ်တွေတင်ပေးပါလား :)
အကို ဆရာတာရာမင်းဝေ နဲ့ ဝေမှုးသွင်ရေးတဲ့
Unknown September 7, 2012 at 4:01 AM
တ ချို့ စာ အုပ် တွေ က download မ ရ ဘူး ဖြစ် နေ တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲသိချင်ပါတယ်။အ ခု လို မျှ ဝေ ပေး တဲ အ တွက် လဲ ကျေး ဇူး အ ရမ်း တင် ပါ တယ်။.
တ ချို့ စာ အုပ် တွေ က download မ ရ ဘူး ဖြစ် နေ တယ်။ ဘယ် လို လုပ် လို့ရ မ လဲ သိချင် ပါ တယ်။အ ခု လို မျှ ဝေ ပေး တဲ အ တွက် လဲ ကျေး ဇူး အ ရမ်း တင် ပါ တယ်။.
JuneJune Lwin October 8, 2012 at 6:47 AM
ကျွန်တော်လဲ ငါ့ရင်ခွင်ကြားက ဓားသွားတစ်လက်ကို ရှာပြီးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ
Unknown January 27, 2013 at 3:27 AM
အစ်ကိုဆိုဒ်လေးက ကျွန်တော်လို ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်နေသူအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးဆိုဒ်လေးပါပဲ. ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အစ်ကိုရေ.........
ငါ့ ရင် ခွင် ကြားကနှင်း ဆီဓားသွားတစ်လက်စာအုပ် ရှိရင် တင်ပေးပါ အကို
Asiavillage May 24, 2013 at 2:08 AM
Ko Chan Min,
Do you know the title of Tar Yar Min Wai's first short novel.
It was written when he was in eight standard student.
It's about တာရာဖိနပ်ကလေး (a boy )နှင်. ကြိုးသိုင်းဖိနပ်ကလေး (a girl).
Could you pls upload it (or) let me know the title if it is available.
ကျော်သက်လွင် August 20, 2014 at 11:33 AM
ပြန်ကြည့်ပေးပါအုံးနော်------thank ypu ပါ
Unknown October 16, 2014 at 1:42 PM
အဆင်ပြေမယ်ဆို ပြာ နဲ့ ကျွန်တော်နှင့် နွေယာဉ်စွန်းတန်း စာအုပ်လေး နှစ်အုပ် ရှာပေးပါဦးလားဗျာ